< 1,17 Nhichapụ ekpochi faịlụ
Ihichapụ faịlụ na mgbe ahụ na-achọ ka naghachi ha bụ nnọọ nkịtị ọnọdụ. Luckily, ọtụtụ softwares maka faịlụ mgbake adị. Ma, ndị na-arụ ọrụ softwares naanị na pụrụ iche nyiwe dị ka Windows ma ọ bụ OS X. Ma, ihe na-eme mgbe ị na-ihichapụ kọntaktị site na gị Gmail ma ọ bụ Outlook akaụntụ? Ma ọ bụ ọbụna si ị smartphone, n'agbanyeghị ma ọ bụ Android ma ọ bụ iPhone?
Ozi ọma ahụ bụ, niile ehichapụ kọntaktị nwere ike Ewepụtara. Anyị na-ewetara gị obere na mfe Nkuzi maka agbake ehichapụ kọntaktị site na gị Gmail, Outlook, Android ma ọ bụ iPhone.
Weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si Gmail
Google Ndi ana-akpo dị ukwuu mgbe ọ na-abịa ụlọ maka na ịchekwa adreesị na ọmụma maka gị niile enyi na enyi na. Ma, Google Ndi ana-akpo mgbe ụfọdụ na-agbakwụnye ọtụtụ enweghị isi kọntaktị. Mgbe ahụ, ị ​​na-amanye ma na-Ama ị na-adịghị mkpa ma ọ bụ ihichapụ ya. Ọ bụrụ na ị họrọ ihichapụ kọntaktị, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ mfe na ị nwere ike ehichapụ a kọntaktị ị ka mkpa. Ozi ọma bụ na Gmail Ndi ana-akpo nwere ikike iji weghachi ehichapụ kọntaktị. Bad ozi ọma bụ na weghachi etiti oge bụ nanị maka ndị gara aga ụbọchị 30. Soro ndị a atọ mfe nzọụkwụ iweghachi gị ehichapụ Gmail kọntaktị.
Nke mbụ niile, i kwesịrị pịa na obere akụ na n'elu n'akụkụ aka ekpe, na-esote Gmail. Mgbe ahụ, họrọ ana-akpo.
Mgbe ị na-ahọrọ Ndi ana-akpo, nanị pịa na Ọzọ bọtịnụ. Na nyere menu, ị ga-ahụ otu nhọrọ na-akpọ weghachite kọntaktsị.
Ugbu a, naanị ihe fọdụrụ n'ihi na ị na-eme bụ na-ahọrọ etiti oge n'ime ikpeazụ ụbọchị 30. Mgbe ị na-ahọrọ etiti oge, pịa Weghachi. Na na bụ mara mma nke ukwuu ya. Mfe, ọ bụghị ya?
Weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si Outlook
Otu ihe na-aga n'ihi Outlook. Ugbu a, i nwere ike na-eji Outlook.com ma ọ bụ Microsoft Outlook (nke na-abịa na Microsoft Office). Ọ dịghị mkpa nke na otu onye ị na-eji, n'ihi na anyị ga-ekpuchi ha abụọ. Dị nnọọ ka Gmail, Outlook.com-enye gị ohere naanị naghachi kọntaktị na anọwo na-ehichapụ na n'oge gara aga ụbọchị 30. Ka amalite!
Mgbe ịbanye na Outlook, pịa na obere dotted square na akara ngosi na n'elu aka ekpe akuku. Site n'ebe ịhọrọ Ndị mmadụ udi.
Ugbu a na ị họrọla 'Ndị mmadụ', pịa na Jikwaa bọtịnụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ multiple nhọrọ. Ị chọrọ pịa na abụọ na otu onye - Weghachi ehichapụ kọntaktị.
Mgbe ị na-ahọrọ a nhọrọ, ịhọrọ kọntaktị ị chọrọ weghachi, na nanị pịa Weghachi. Nke ahụ bụ ya. Easy-eme ya, nri? Ugbu a, ka anyị hụ otú iji weghachi ehichapụ kọntaktị site na Microsoft Outlook.
Iweghachi ehichapụ faịlụ na kọntaktị site na Microsoft Office bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na ị na-eji a Microsoft Exchange Server na akaụntụ.
Nzọụkwụ mbụ bụ na-pịa nchekwa, na mgbe ahụ Naghachi ehichapụ ihe. Ọ bụrụ na a nhọrọ bụ dịghịzi adị, mgbe ahụ ị na-adịghị eji a Microsoft Exchange Server na akaụntụ, na Iweghachi ehichapụ kọntaktị bụ ekwe omume.
Na na bụ mara mma nke ukwuu ya. Ihe niile n'ebe na-ekpe ime bụ n'ihi na ị na-ahọrọ nke na-ehichapụ ihe ị chọrọ iji naghachi.
Weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si gam akporo
Ewepụta ehichapụ kọntaktị site na Android bụ a bit mgbagwoju anya karịa ihe gara aga mgbake nhọrọ. Ị ga-mkpa software akpọ Android Data Recovery. Ị nwere ike ibudata software si buttons n'okpuru.
Enyere gị aka agbake data, nke furu ruru factory nrụpụta, mmebi, okuku na ROM na-egbu maramara.
N'otu n'otu Họrọ ihe Android Files ị chọrọ iji naghachi.
Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị wụnye Android mgbake ngwá ọrụ. Ọ dị mfe iji wụnye a software, dị nnọọ eso ntuziaka ntọlite. Ugbu a, nke a bụ ebe anwansi amalite.
Jikọọ gị android ekwentị gị PC eji gị eriri USB. Gbaa ndị software. Mgbe oghere, software ga-enye gị ntụziaka otú e si enyere USB debugging.
Mgbe ahụ Android Data Recovery ga-ekwe ka ị họrọ nke ụdị nke faịlụ ị ga-achọ naghachi. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi kọntaktị gị nanị, nanị họrọ kọntaktị.
Ugbu a, nzọụkwụ ọzọ-enye gị ohere ike iṅomi faịlụ niile ma ọ bụ ehichapụ faịlụ naanị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta oge gị, na i ji n'aka na kọntaktị gị na-ehichapụ, mgbe ahụ, na-ahọrọ iṅomi maka ehichapụ faịlụ.
Ugbu a, ị ga-eso ndị dị mfe ntụziaka nyere site Android Data Recovery. Ntuziaka-egosi gị otú na-ekwe ka software aghọta na ekwentị gị.
Mgbe ngwaọrụ na-ọma ghọtara, pịa Doppler na-eche maka anwansi na-eme. Niile nke gị ehichapụ kọntaktị ga-egosi n'elu, na ị ga-enwe ike ịhọrọ nke ndị ị chọrọ iji weghachite.
Weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si iPhone
Adịkwa gị kọntaktị nkọwa bụ nkịtị maka iPhone ọrụ, kwa. Oge ọ bụla ị jikọọ iPhone gị PC, iTunes na-akpaghị aka syncs niile data gị iPhone si nchekwa data. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ndabere kọntaktị gị ọ ga-adị mfe iji weghachite ha.
Dị ka Apple si iPhone aghọwo a chọọ-mgbe handset ụwa, otu n'ime ndị kasị nkịtị ihe ahụ pụrụ ime na-eji smartphone bụ na ị nwere ike hapụ kọntaktị gị nkọwa site mberede. Jailbreak, iOS nweta nkwalite ma ọ bụ na-eweghachiri ụlọ ọrụ ntọala nwere ike ihichapu gị data, ma nke ahụ apụtaghị na ọ na-ruo mgbe ebighị ebi. Oge ọ bụla ị jikọọ gị iPhone gị PC, iTunes na-akpaghị aka syncs data na iPhone si nchekwa data. Dị ka ogologo oge na ị nwetara a ndabere kọntaktị gị, ị nwere ike mgbake ha si gị iPhone mfe.
Ị nwere ike ma agbake kọntaktị site na iTunes ndabere ma ọ bụ iṅomi gị iPhone ozugbo ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ndị dị mkpa ndabere.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-agbake kọntaktị gị site iTunes ndabere, ebe a bụ nzọụkwụ ị kwesịrị ị na-eso:
1. Tupu Ijikọ iPhone, hazi iTunes otú ọ na-akpaghị aka mmekọrịta oge a.
2. Jikọọ gị iPhone gị PC ma ọ bụ Mac.
3. Open iTunes, nri-pịa na ngwaọrụ gị na-ahọrọ "Weghachi si ndabere."
Bụrụ na ị bụghị mmekọrịta gị iPhone, mgbe ahụ, ị ga-ibudata a software maka Windows ma ọ bụ Mac.
Gbaa ndị software na jikọọ na gị iPhone. Mgbe ahụ, pịa Malite iṅomi.
Mgbe ahụ, họrọ ana-akpo & Ozi & Oku dekọọ na họrọ kọntaktị ị chọrọ naghachi. Nanị weghachite faịlụ site na ịpị Naghachi.
Ma, i nwere ike zọpụta onwe gị ime ihe nile nke ndị a. Ị nwere ike iwunye Wondershare Dr Fone na gị iPhone / Android ngwaọrụ. Wondershare Dr Fone bụ ike na ngwa na-echebe ma na-enyere gị aka naghachi data. Ọ na-ekwe ka ị na-iṅomi ma ịhụchalụ niile kọntaktị, ozi, WhatsApp akụkọ ihe mere eme, foto, akwụkwọ, na ihe ndị ọzọ, na mgbe ahụ họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi.
> Resource> Naghachi> Olee otú iji weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si Gmail / Outlook / Android / iPhone